Birao fizahantany afrikanina: Greg Bakunzi ao amin'ny Red Rock Initiative dia mampirehareha an'i Rwanda fizahan-tany
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Birao fizahantany afrikanina: Greg Bakunzi ao amin'ny Red Rock Initiative dia mampirehareha an'i Rwanda fizahan-tany
Ivotoerana ara-kolontsaina Red Rocks ao Rwandmpanorina Greg Bakunzi androany no voatendry ho mpikambana farany ao amin'ny birao Boar ny fizahantany afrikaninae. Izy dia kintana amin'ny fizahan-tany afrikanina miaraka amin'ny vina ho an'ny indostria, ho an'ny faharetana, ary ho an'ny fomba tsy manam-paharoa amin'ny famoronana orinasa any Rwanda sy Afrika manontolo.
Tamin'ny volana febroary 2019 Andriamatoa Bakunzi dia nampirehareha an'i Rwanda fireneny rehefa naseho tamin'ny sarintany momba ny fizahantany sy ny fiarovana ny tontolo izy ho mpanorina ny Red Rocks Cultural Center ary nitaky loka iray hafa nandritra ny loka 10 momba ny Investment Investment and Business Forum for Africa (INVESTURO). Ny hetsika dia nokarakarain'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahantany (UNWTO), FITUR, ary Casa Africa.
Androany Andriamatoa Greg Bakunzi dia nanatevin-daharana ireo fandraisana andraikitra vaovao natolotry ny mpitondra ao amin'ny Birao fizahantany afrikanina.
Ny filoha ATB Alain St. Ange dia niarahaba an'i Greg androany nanatrika ny fanendrena azy. “Andro tsara ho an'ny fizahantany afrikanina. Tena faly aho Andriamatoa Bakunzi nanaiky ny hiditra ao amin'ny birao sy hizara ny fitarihany sy ny fahitany an'i Afrika. Vaovao tsara ho an'ny fikambananay vaovao io. ”
Greg dia nanatona ireo mpikambana namany sy ny indostrian'ny fizahantany afrikanina androany:
Amim-boninahitra sy fankasitrahana lehibe no isaorako anao noho io fotoana lehibe io ho tonga ampahany mamokatra ao amin'ny birao fizahantany afrikana, tena mankasitraka ny fahalalam-pomba nomenao ahy aho.
Misaotra anao indray noho ny fahatokisanao ahy. Manantena ny hanombohana ny asako amin'ny maha-mpikambana anao aho. Ny diako amin'ny fizahan-tany sy ny fampandrosoana ny vondrom-piarahamonina dia maharitra 15 taona mahery ary amin'ny maha mpikambana vaovao ao amin'ny ATB ahy dia faly aho hitondra ny fahaizako sy ny fahalalako hanohanana ny fanatanterahana bebe kokoa ny tanjon'ny Afrikana.
Nanomboka tamin'ny 2001 aho tamin'ny naha mpitari-dia ahy ary nanangana ny orinasako Amahoro Tours izay nitombo hatramin'ny taona 2008 aho nahita ny orinasako nitombo tamin'ny ambaratonga izay reharehako. Aorian'izany, tamin'ny 2011, nieritreritra aho fa tokony hanao zavatra hafa nefa tsy mahafoy an'i Amahoro Tours, tamin'izay aho no tonga niaraka tamin'i Red Rocks Rwanda ho ivon-toeran-kolontsaina, izay miasa miaraka amin'ny fandraisana andraikitra Red Rocks ho an'ny fampandrosoana maharitra, orinasa tsy mitady tombony fikambanana miasa ao Afrika miasa miaraka amin'ireo olona sy vondrona mba hampirisika, hanohana ary hankalaza hetsika maharitra kokoa amin'ny alàlan'ny fanentanana momba ny fiakaran'ny maripanan'ny tany ary koa famaranana ny fampiasana harona plastika, ka hitahiry ireo harena voajanahary sy lovantsika ara-kolontsaina amin'ny tanjona hampiroboroboana ny fizahantany sy ny fiarovana ny tontolo iainana ho toy ny fitaovana fanamafisana orina ny vondrom-piarahamonina maharitra hampisondrotra ny satan'ny mpikambana eo amin'ny fiaraha-monina sy toekarena.
Manantena ny hampiasa ny fahafahako amin'ny maha mpisolovava ny fizahan-tany tompon'andraikitra mahasoa ny vondrom-piarahamonina sy ny faritra manodidina aho amin'ny alàlan'ny fanomezana asa ary miantoka ny fahafantaranay izay fanamby atrehin'ireo vondrom-piarahamonina sy ny fomba handresena azy ireo amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fahaizany ho toy ny fototra hitadiavana vahaolana maharitra
Araka ny tatitra navoakan'ny World Economic Forum (WEF), hitombo avo roa heny ny indostrian'ny fizahan-tany ao anatin'ny 5 taona ho avy, ary miteraka trily an-tapitrisany isan-taona ary anisan'ny paikadiko manokana ny fametrahana ny tanjonay ho tian'ireo mpandeha, amin'ny fanekena ny finoana fa Ny laharam-pahamehana amin'ny sehatry ny fizahantany dia midika fa ny olona sy ny toekarena amin'ny ankapobeny dia hahazo tombontsoa betsaka satria manerantany ny kaontinanta afrikanina dia manana manintona bebe kokoa sy manintona kokoa voajanahary hanolotra mpandeha.
Mifanohitra amin'io sehatra io no hampiasako ny lampihazo hamporisihana ny hafa hahatakatra tsara fa mila mamolavola na manova ny fomba fisainantsika isika ary miaiky fa ny fiaraha-monina sy ny fizahan-tany dia mahasoa amin'ny fampandrosoana ny toerana halehantsika.
Amin'ny maha mpisolovava anao amin'ny fampandrosoana ny fiaraha-monina dia faly aho mampahafantatra anao fa nomena loka iraisam-pirenena ny Red Rocks noho ny asa izay nataonay. Vao tsy ela izay dia Red Rocks no voafantina ho iray amin'ireo fikambanana fizahan-tany fiarahamonina tsara indrindra any Rwanda ataon'ny Chamber of Tourism. Nomen'ny Firenena Mikambana loka koa izahay ho iray amin'ireo fikambanana manao fizahan-tany tsara indrindra any #Africa ary Green Destination Travel no nanome taratasy fanamarinana ho an'ny faritra fitsangatsanganana Green Destination tsara indrindra.
Raha ny hevitro, ireo zava-bitako lehibe indrindra dia ireo hetsika sy kaonferansa samihafa natrehiko eran'izao tontolo izao. Mampiseho ahy ireo fisehoan-javatra ireo fa tena betsaka ny zavatra tokony hatao mihoatra ny nataoko. Ny ampahany tsara indrindra amin'ny kaonferansa dia ny fividianako zavatra iray ary hizarako amin'ny olon-kafa ao amin'io orinasa io ary ny tanjoko dia ny hampiasa Red Rocks amin'ny ho avy ary tiako ho iray amin'ireo tanjona ecotourism tsara indrindra any amin'ny faritra sy amin'ny kaontinanta ity.
Fantatro fa ity andraikitra ity dia misy andraikitra ary faly aho manolotra ny ezaka farany vitako ho an'ny fandrosoana lehibe amin'ny fampandrosoana ny fizahan-tany, ary ny fampiasam-bola fizahan-tany any amin'ny faritra.
Misaotra anao noho io fotoana nahafinaritra nahatonga anao ho anisan'ny Biraon'ny fizahantany afrikanina io ary manantena ny asa ho avy miandry antsika izahay.
Lahatsoratra misimisy momba ny Red Rock Initiative sy Greg Bakunzi kitiho eto
Misimisy kokoa momba ny Birao Afrikana momba ny fizahantany sy ny fomba hahatongavana ho mpikambana www.africantourismboard.com
Fitokonana: Scandinavian Airlines SAS izay handà mpandeha 70,000 XNUMX+
Thailand: nampitombo ny fidiram-bolan'ny fizahan-tany ny Songkran 2019